Homo Loves: Another First for Me!
ပျင်းရိငြီးငွေ့ပေမဲ့ အဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ့် တနင်္ဂနွေ မနက်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော့် ရှေ့မှာ ထိုင်နေမိပါတယ်။ ဟိုအရင်နေ့ရက်များဆီက ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်နေခဲ့တာမျိုးနှင့်မတူ ဆိုဖာပျော့ပျော့ပေါ် ကျွန်တော့်တင်နှစ်မွှာကြား ရေခဲအိတ်လေးတစ်ခုကြားညှပ်ထိုင်နေခြင်းက တော့ ထူးခြားပါတယ်လေ။ အဲဒီခံစားမှုလေးက ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောပြလိုရင်းရဲ့အစ.....။
စာဖတ်သူအချို့ကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဦးအစပျိုးအတွေ့အကြုံဝတ္ထုလေးတွေ ကိုဖတ်ခဲ့ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရည်းစား 'မင်းသူ' နှင့် စဖြစ်ခဲ့ကတည်းက ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ရက်သတ္တပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေမှာသာ ဖြစ်ပျက်တတ်ခဲ့ကြတာပါ။ နှစ်ဦး ကြား ပတ်သက်မှုတွေကလည်း ထူးထူးခြားခြား သာယာခဲ့ကြတာပေါ့နော်။ မနေ့ညတုန်းကလည်း ခါတိုင်းလို အေးဆေးသက်သာပဲဖြစ် မယ် ကိုယ်တွေထုံးစံအတိုင်းလို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့အိမ်ကို အချိန်မှန် ကျွန်တော်ရောက်တာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါသနာလိုဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ သူ့ဧည့်ခန်းမှာအတူထိုင် ၀ိုင်တစ်ပုလင်း ဒါမှမဟုတ် ဘီယာတစ်ပုလင်းလောက် စွဲဖြစ်ကြတာပုံမှန်။ မနေ့ညကတော့ အေးသာယာဝိုင်အကောင်းစားတစ်ပုလင်း 'ကစ်'ဖြစ်ကြပါ တယ်။ ကျွန်တော် ဒုတိယခွက်မော့ပြီးလို့ တတိယခွက်လှမ်းစဉ်မှာပဲ သူ့မြှူဆွယ်မှုအပေါ် လူကောစိတ်ကော ပူနွေးပျော်ဝင်စပြုလာပြီ ပေါ့။ 'ကလင်...ကလင်' အဲဒီအချိန်မှာပဲ တံခါးဘဲလ်သံကမြည်လာတယ်။ မင်းသူနဲ့ အိပ်ခန်းထဲဝင်ဖို့ ဟန်ပြင်တုန်း ကျွန်တော်ကအချိန် ဆွဲပြီး ၀ိုင်'ကစ်'နေတာ အခုတော့ အနှောင့်အယှက်ကလာပြီ။ ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ ကျွဲမြီးတိုသွားပါတယ်။ မင်းသူက တံခါးဝမှာ ဘဲ တစ်ပွေနှင့် စကားပြောနေပြီးနောက် အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတာပါ။ သူ့ထက် ၁၀နှစ်လောက်ငယ်မဲ့ ဘဲလေးက အရင်ဝင်လာပြီးမှ မင်းသူ က ၀င်လာပါတယ်။ သူတို့ စကားကြောက အတော်ရှည်တာဗျ။ မဖိတ်ခေါ်တဲ့ ဧည့်သည်အတွက် ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စပြုလာတယ်။ မင်းသူ ကြည့်ရတာ စိတ်လိုလက်ရ စကားပြောနေတော့ ဘာတွေလဲ သံသယဖြစ်မိရသလို ရှေ့ဆက်ဘာဖြစ် မလဲ အာရုံရလာပါရဲ့။
'မင်းသူ'က သူ့သူငယ်ချင်း 'ချမ်းမြေ့'နှင့် ကျွန်တော့်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။အဲဒီကောင်လေးက လက်ကမ်းပေးတော့ ဆွဲယူနှုတ်ဆက် ရသေးတာပေါ့။ ပြီးမှ ဆိုဖာပေါ်ပြန်ထိုင်ရတယ်။ မင်းသူ ခဏပြောက်သွားပြီးနောက် ၀ိုင် အသစ်တစ်ပုလင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ 'ချမ်းမြေ့'က အတော်ကြည့်ကောင်း တဲ့ငနဲလေးပါ။ မင်းသူထက်တော့ နည်းနည်းပိန်တယ်။ဖီလင်တက်နေတာ သွားပါပြီဗျာ။ ၀ိုင်ပဲ သောက်မိတယ် စိတ်မပါဘဲ စကားရောဖောရော ပြုရရင်းလေ။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းလဲ ၀ိုင်တန်ခိုးနှင့် ရီဝေစပြုလာပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အာရုံရနေဆဲက ချမ်းမြေ့ရဲ့ အကြည့်တွေ ပြုမူဆက်ဆံနေတာတွေက မင်းသူ ကျွန်တော့်ကိုပြုမူနေကြပုံစံမျိုး..။
အဲဒီအချိန်မှာ မင်းသူက ပြောနေတဲ့စကားအကြောင်းအရာကို လိင်ကိစ္စဘက်ပြောင်းတယ်။ သူက ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်ပြရင်း ချမ်းမြေ့ကိုမေးတာများ 'ဒီတင်ပါးတွေလောက် ကောင်းတဲ့ဟာ မင်းစားဖူးလား ငါ့ကောင့်'
၀ိုင်သောက်တာကြောင့်ရော ရှက်သွားတာကြောင့်ရော ကျွန်တော့်မျက်နှာ ခပ်နီနီနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ 'မင်းသိသင့်ပါတယ် ငါစနေနေ့ ညတိုင်း ဒီကိုလာနေတဲ့ဟာ' မင်းသူ တဟားဟားရယ်ကာ ချမ်းမြေ့ကို ထပ်ကြွားလိုက်သေး။ 'သူ့ တင်ပါးကြီးတွေက ငါစားဖူးသမျှထဲ အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုပဲကွ' ကျွန်တော့်မျက်နှာဟာ နီရဲသွားပြန်တော့ ချမ်းမြေ့က ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြကာ 'အဲဒါ ဟုတ်လားဗျ' တဲ့မေးတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုအဖြေပေးရမယ်မသိ။
ညဟာ တဖြည်းဖြည်းနက်လာပါပြီ။ အခုညဟာ အရင်က ညတွေနှင့်မတူ ကွဲပြားသလို အရိပ်အယောင်မျိုးခံစားရပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်လာတော့မှာလဲ ကျွန်တော်မတွေးတတ်တော့။ သူတို့စကားတိုးတိုးသက်သာပြောနေကြပြီးနောက် နှစ်ယောက်လုံးတပြိုင်တည်းထရပ် ကာ ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ ဆိုဖာပေါ်တစ်ဖက်တစ်ချက်က ကိုယ်စီထိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ မင်းသူက ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူကာ သူ့ပေါင်ခွဆုံပေါ်တင်ပေးတယ်။ သူ့ငပဲကို ဘောင်းဘီပေါ်က ကိုင်ကြည့်ရတာတော့ ပျော့နေဆဲ။ ဒါပေမဲ့ ခပ်ကြီးကြီးနဲ့ ဖိတ်ခေါ်နေရဲ့ ကျွန်တော့်ကို။ 'မင်းသိလား....ဒီအခန်းက တော်တော်ပူတာ' လို့ မင်းသူက ချမ်းမြေ့ကိုပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မင်းသူနှင့် ချမ်းမြေ့ နှစ်ယောက်လုံး ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်မတ်တပ်ရပ်ကာ အ၀တ်တွေချွတ်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်နှင့် မင်းသူ အဦးဆုံးအကြိမ် သူ့အိမ်မှာ ၀ိုင်သောက်ပြီး ရာသီဥတုအကြောင်းပြကာ အ၀တ်တွေသူချွတ်ခဲ့သလို အခုလည်း သူ အစပျိုးနေပြီလေ။ အချိန်သိပ်မရှိတော့ဘူးထင့် နှစ်ယောက်လုံးအ၀တ်တွေချွတ်လိုက်တာ သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး တွေကလွဲလို့ ဘာမှမရှိကြ။နောက်တော့ ကျွန်တော့်မျက်လုံးကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်ကာ သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးလက်ကျန် အ၀တ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ကြပါတယ်။
၀ိုင်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း ကျွန်တော့်စိတ်တွေ မလှုပ်ရှားနိုင်သေး။ သူတို့ငပဲတွေက မတ်ထောင်မနေသေးဘဲ ပျော့ပြီး ပေါင်တွေကြားထဲ တန်းလန်းရှိနေသေးတယ်။ ကိုယ့်ငပဲကိုယ် ကိုင်ကာ ပွတ်သပ်ဆွဲညှစ်နေကြရဲ့။ မင်းသူ့ ငပဲက အမြဲတစေ ကျွန်တော့်ကို ခြောက်လှန့်နေတာပါပဲ။ (သူ့ဟာက အနည်းဆုံး သုံးလက်မလောက် ကျွန်တော့်ဟာထက်ပို ရှည်ပြီး တုတ်လည်းတုတ်တယ်။) ကျွန်တော့်ရှေ့မှောက် သူတို့ငပဲတွေ တဖြည်းဖြည်းထွားလာတာ လန့်များပင်လန့်မိရသေး။ ချမ်းမြေ့ ငပဲက မင်းသူဟာလောက်ရှည်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ငပဲခေါင်းက ပိုများကြီးသလားပဲ။ ချမ်းမြေ့ရွှေဥတွေကြည့်ရတာ ပိုပြီးလုံးဝန်းကာကြီးတယ်။ မင်းသူဟာထက်ကြီးပြီး တွဲကျနေတာဗျ။
တိတ်ဆိတ်ပြီး ဘာသံမှမထွက်တာကို မင်းသူက ကျွန်တော့်ကို စကားပြောခြင်းဖြင့် ဖြိုခွင်းလိုက်ပါတယ်။ 'လာပါ အချစ်လေးရာ... မင်း အ၀တ်တွေချွတ်လိုက်နော်' ကျွန်တော် တုန့်ပြန်စကားတောင်ပြောခွင့်မပေး နှစ်ယောက်လုံး ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာပြီး ကျွန်တော့်ရှပ် အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီတွေကို အတွင်းခံကလွဲလို့ဆွဲချွတ်ကြတယ်။ မင်းသူ ခဏတော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာအရိပ်အခြည်ကြည့်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ခြေထောက်အစုံကို ဆိုဖာအစွန်းကိုဆွဲယူကာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ကျွန်တော့်ခြေထောက်ကနေ ဆွဲချွတ်ယူသွားရော။ 'မင်း ကိုမပြောဘူးလား ငါ့ချစ်ချစ် တင်ပါးတွေက ရှယ်ဆိုတာ' မင်းသူက ချမ်းမြေ့ကိုကြွားနေတာ။ 'အိုး! ငါ့ကောင်' ချမ်းမြေ့မျက်လုံးတွေက အားရ၀မ်းသာနှင့်။ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေကို လာပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်ရော။
ဘီယာတွေ ၀ိုင်တွေတန်ခိုးတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ် အသစ်အဆန်းတစ်ခုကို စမ်းသပ်ချင်စိတ်ကြောင့်ထင်ပါတယ် ကျွန်တော် ငြင်းဆန် မှုမပြု သူတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲ စောင့်ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်လာမိပါပြီ။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ပွေ့ချီပြီး အိပ်ခန်းရှိရာ ကို သယ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ မစဉ်းစားမိ။ သူတို့တွေ ကျွန်တော့်ကိုဘာများလုပ်ကြမှာပါလိမ့်? မင်းသူက ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုငုံ့ကြည့်ပြုံးပြကာ 'အချစ်လေး အရသာအသစ်တစ်ခုလောက် မစမ်းသပ် မခံစားချင်ဘူးလား' တဲ့မေးတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးက ဒူးထောက်ထိုင်အောင် ဖိအားပေးပြီးနောက် ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့် သူတို့မတ်တပ်ရပ်ပြန်တယ်။ 'အိုကေလေ ကို' ကျွန်တော် မင်းသူကို အဖြေပြန်ပေးရတာပေါ့နော်။ 'အခု...ချစ်လေးဘယ်လောက်စွမ်းကြောင်း ချမ်းမြေ့ကိုပြလိုက်ပါလား' ကျွန်တော်က ဒါမျိုးဆို သိပ်ဖိအားပေးစရာမလိုပါ။ ချမ်းမြေ့ရဲ့ငပဲခေါင်းကို နှုတ်ခမ်းလွှာတွေနှင့် ညှပ်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေးလေး လျှာနှင့်စတင်သရပ်ပါတယ်။ ငပဲကြီးက ချက်ချင်းလို မာတောင့်လာတော့ ကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းကာ စတင်အလုပ်လုပ်ပါရော။ ကျွန်တော်လုပ်သမျှ ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း ချမ်းမြေ့အသက်ရှူသံ ခပ်ပြင်းပြင်းတွေက အဖြေပေးနေပါတယ်။ မင်းသူက ကျွန်တော်လုပ်နေတာကိုဘေးက ကြည့်နေရင်း ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲယူကာ သူ့ငပဲကိုကိုင်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် လည်း လက်နှင့် ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင် ပွတ် သပ်ပေးသလို နှုတ်ခမ်းများကတော့ ချမ်းမြေ့ငပဲကြီးကို ရေခဲချောင်းစုပ်သလို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စုပ်မျိုပစ်လိုက်တယ်။
မင်းသူ ပစ္စည်းကြီးက မာတောင်ပြီး ထွားလာလိုက်တာ လက်ထဲမာတောင့်နေတာပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး အစွမ်းကုန်မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲကြီးတွေနှင့်လေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် စုပ်မှုတ်ခြင်းက သူတို့လိုချင်တဲ့ အဖြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါပဲ။
မင်းသူရဲ့ ပစ္စည်း လက်မတိုင်းကို သိသလို ဖောင်းနေတဲ့သွေးကြောမျှင်ကြီးတွေ ဘယ်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ ချမ်းမြေ့ ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အသစ်အဆန်းတစ်ခုလေ။ ဘုရားသခင်! ချမ်းမြေ့က တစ်မျိုးတစ်ဘာသာ။ မင်းသူရဲ့ငပဲက မာတောင့်လာ ရင် ရှေ့တည့်တည့်ကို တန်းမတ်နေအောင် ညွှန်ပြနေတတ်တာဗျ။ ချမ်းမြေ့ငပဲကတော့ ထိပ်ပိုင်းမှာအပေါ်ဘက်ကို နည်းနည်းကောက် သွားတာ ဆင်အံငှက်ပျောသီးကြီးကျနေတာပါပဲ။ ပြီးတော့ မင်းသူငပဲက အညိုရောင်သမ်းပြီး သွေးကြောတွေကထောင်နေတာ။ ချမ်းမြေ့ ငပဲက အဖြူရောင် marble ကျောက်သားလို ဖြူဖွေးပြီး ငပဲခေါင်းက ပန်းသွေးရောင်ထလို့ သွေးကြောတွေက စိမ်းလို့။ ရွှေဥတွေကတော့ နှစ်ယောက်လုံး လုံးဝန်းကြီးမားကြပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရတော့မလဲ သိချင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာမှမသိတာပဲကောင်းပါတယ်လေ။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက သူ တို့ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိနေကြသလို ကျွန်တော့်မှာတော့ အကူအညီမဲ့။ သူတို့နှစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကိုပွေ့ပြန်ကာ အိပ်ယာပေါ်ကို လှဲလျောင်းစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သုံးယောက် အိပ်ယာပေါ် လူးလိမ့်နေတုန်း ရုတ်တရက် မင်းသူက 'Shit! ငါမေ့နေ တယ် တစ်ခုခုယူဖို့' လို့ပြောပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကာ ပျောက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ရင်းနှီးပြီးသား tube ဘူးတစ်ခုကိုယူကာ သူပြန်ပေါ် လာပါတယ် ခဏအကြာမှာတော့။ မင်းသူက အဲဒီ tube ဘူးကို ချမ်းမြေ့ဆီ လက်လှမ်းပေးလိုက်ကာ 'ခပ်များများလေး မင်းငပဲမှာ လိမ်း လိုက် ငါ့ချစ်လေး ခရေ၀က တကယ်ကြပ်တာ'
'အာ...အ' ချမ်းမြေ့က တကယ်နုညံ့တာပဲဗျ။ သူ့လက်ချောင်းတွေက ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေကို ငြင်ငြင်သာသာပွတ်သပ်ရင်း အခြားလက်က လက်ချောင်းလေးတွေကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ ဖြည်းဖြည်းသွင်းတယ်။
'Relax ဘော်ဒါ၊ တင်းမထားနဲ့ လျော့ထား' သူပြောနေတဲ့ပုံက အရမ်းကြောက်နေတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို ဖျောင်းဖျနေတဲ့ ဆရာဝန် တစ်ယောက်ပုံစံမျိုး။ ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကို ကား သူလုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေအတွက်အသင့်ဖြစ်အောင် စိတ်ကိုလျော့လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ ခပ်အေးအေးလက်ချောင်းလေးတွေဝင်လာတော့ ကျွန်တော် ခပ်တိုးတိုးတော့ ညည်းညူမိပါရဲ့။ ချမ်းမြေ့က tube ထဲ က ချောဆီတွေကို သူ့လက်ထဲညှစ်ထည့်ကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲသွင်းနေတာကိုး။
'မင်းအရင်ချမလား?' ချမ်းမြေ့က မင်းသူကိုမေးတယ်။ မင်းသူကို ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ မင်းသူက ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ ကျွန်တော့်ခြေ ထောက် ခပ်ကားကားထဲနေရာဝင်ယူတယ်။ 'အိုကေ ချစ်လေး ခေါင်းအုံးခါးအောက်ခုပြီး တင်တွေကို ပိုမြောက်အောင်လုပ်ပေးကွာ' ကျွန်တော်လည်း ခါးအောက်ခေါင်းအုံး ထူထူထိုးထည့်ပြီး ဒူးတွေကိုရင်ဘတ်ဆီရောက်အောင် ကွေးတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ ချမ်းမြေ့က တက်မက်တဲ့မျက်လုံးတွေနှင့် ကြည့်နေရဲ့။ သူ့ငပဲတွေကလည်း Ready လို့ပြောနေတယ်။ မင်းသူ အကျင့်အတိုင်း အချိန်ဆွဲတယ်လေ သူ့ငပဲ ခေါင်းလေးကို ခရေ၀ထဲသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်ပြီး ကလိတာ၊တဖတ်ဖတ်မြည်အောင် ရိုက်ခတ်တာလုပ်ပြီး ကျွန်တော့် စိတ် မရိုးမရွဖြစ်အောင် သူလုပ်တယ်။ 'အိုး..အ..' ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး မရိုးမရွဖြစ်ကာ ခေါင်းထောင်ထမိပါရဲ့။ ဒီတော့ မင်းသူက ကျွန်တော့်ပခုံးကို မကြွအောင်ဖိပေးဖို့ ချမ်းမြေကကိုညွှန်ကြားသပေါ့။ ချမ်းမြေ့ကလည်း စိတ်လိုလက်ရပါပဲ ကူညီတယ်။
မင်းသူ အတန်ကြာ ဆွနေပြီးမှ သူ့ငပဲကိုတဆုံးထည့်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းကျွန်တော့်ကိုလိုးပါတော့တယ်။ ချစ်သူနှစ်ကိုယ်ထဲနွှဲတာမဟုတ် ဘဲ ခပ်ထွားထွား ငပဲနှစ်ချောင်းရဲ့ အလိုးကိုခံရတော့မှာပါလား။ ကျွန်တော် ကိုင်တွယ်နိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားမိပါတယ်။
ခဏကြာတော့ မင်းသူ ငပဲအ၀င်အထွက်နှေးလာကာ ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကို ဖျစ်ညှစ်တာခံစားလိုက်ရပါတယ်။ မင်းသူဘက်ကို အာရုံ လျော့တော့ သန်မာတဲ့ ချမ်းမြေ့လက်အစုံဘက်ကို အာရုံစိုက်မိတာပေါ့နော်။ လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ပံခုံးတွေကို မွေ့ယာပေါ်ဖိကပ် နေစေပြီး အခြားလက်တစ်ဖက်ကတော့ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေကို လှမ်းပြီးပွတ်သပ်နေတာလေ။
ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ပြောနေတဲ့ စကားတွေကို နားထောင်ပြီး မိန်းမောနေရတာပေါ့။ 'ဘယ်လိုလဲ ငါ့ကောင်' ချမ်းမြေ့က မင်းသူကို မေးတယ်။
'အမြဲတမ်း ငါ့အကြိုက်ပဲ၊ စားဖူးသမျှအကောင်းဆုံးတစ်ခုပဲကွ' မင်းသူက ကျေနပ်စွာပြန်ဖြေတယ်။ 'ဒီဘက်လာပြီးကြည့်လေ' တဲ့ပြော သေးတာ။ ချမ်းမြေ့က ကျွန်တော့်ပခုံးကိုကိုင်ထားတဲ့လက်တွေကိုလွှတ်လိုက်ကာ မင်းသူဘက်ကို သွားပါတယ်။ 'အိုး...မင်း ဒီခရေ၀ လေးကို ထိုးခွဲထားတာပဲကြည့်ပါဦး' မင်းသူက ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို အားရကျေနပ်စွာပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်တယ်။ ပြီးတော့ ဖြန်းကနဲ တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါရဲ့။
'လုပ်လေ ငါ့ကောင်...ချစမ်းပါ မင်းချစ်သူဟာလေးကို' သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေက ကျွန်တော့်ကိုပိုမို စိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ ကျွန်တော့် မိန်းမောညည်းညူသံတွေဟာ သူတို့ကာမစိတ်ကို နိုးကြွစေသလားမသိ။ ခဏငြိမ်နေတဲ့ မင်းသူဟာ ခပ်သွက်သွက်ပြန်လည် အထုတ် အသွင်းလုပ်ကာ ကစားပါတယ်။ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်အကြာမှာ ခရေ၀ထဲသူ့ဟာကို ပိုပိုဖိသွင်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက် ဆောင့် အသွင်းမှာတော့ သူ့ငပဲကို အဆုံးထိဖိကပ်ထားကာ ငြိမ်နေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် သူတိတယ် သူ့ကျေနပ်မှုကို အဆုံးသတ်သွားရပြီ ဆိုတာ။ သူ့နှုတ်ဖျားက အော်ညည်းသံကိုလည်း 'အိုး...အား..အား' ကြားရတာဗျ။ တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ သူ့ငပဲမှာ စွပ်ထားတဲ့ condom ထိပ်ပိုင်းနေရာလွတ်လေးမှာ သုတ်ရည်ဖြူတွေနှင့်ပြည့်နေတာပါပဲ။ အာ...ဆွဲထုတ်လိုက်တာ အသာထား ရင်ထဲဟာဆင်းသွားရော။
သူ့ငပဲကြီးက ဆွဲထုတ်ကာ ခဏတော့ဆက်မာနေပြီး အပြင်ရောက်တဲ့ ခဏမှာတော့ တဖြည်းဖြည်း ခေါင်းငိုက်ကျသွားပါတယ်။ သူ့ငပဲကို ဆွဲထုတ်ပြီးပြီးခြင်း ချမ်းမြေ့ကို ပြုံးပြလိုက်ကာ 'မင်းအလှည့် ငါ့ကောင်'လို့ ပြောလိုက်လေရဲ့။
ကျွန်တော့်မှာ ခေါင်းအုံးကို ခါးအောက်ခုလျက်ငြိမ်သက်နေရဆဲ။ ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ်ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးရဦးမှာပါလိမ့် မလဲ။ ချမ်းမြေ့က ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ငုံ့ကြည့်ပြုံးပြပြီးနောက် သူ့ငပဲကို အသာစွပ်ကာ အရင်းထိဆွဲဖုံးချိန်ညှိနေရဲ့။ 'ကောင်းပြီ၊ နောက် တစ်ကျော့ဆွဲဖို့အသင့်လားဘော်ဒါ' လို့မေးတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကိုကြည့်ပြီးနောက် ခေါင်းကို အသာငြိမ့်ပြနိုင်ပါတော့တယ်။ မင်းသူ က ကျွန်တော့်ဖင်ကို တဖတ်ဖတ်မြည်အောင် ဆောင့်သွင်းလိုးနေတာကို သူစောင့်ကြည့်နေတာ တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ထင်ပါ့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပြုပေးချိန်ကထက် ပိုထွားနေတယ်။ ငပဲကြီးက မင်းသူ့ဟာလိုပဲ တဖြည်းဖြည်းရှည်လာတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ချမ်းမြေ့ငပဲခေါင်းက ပိုကြီးနေသလိုပဲဗျ။ စိတ်ထဲတွင်သာမက ကျောထဲကပါစိမ့်ကနဲနေအောင်ခံစားမိပါတယ်။ ဒီဟာကြီးနှင့် ကြမ်း ခံရရင်သေမှာပဲ။ မင်းသူ အကြံပေးတဲ့အတိုင်း သူတို့နှစ်ယောက်နေရာလဲလိုက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ချမ်းမြေ့ လက်နက်ကြီးနှင့် အဆင်ပြေစေဖို့ အနေအထားပြင်ရတာပေါ့လေ။ မင်းသူက ကျွန်တော့်တင်ပါးနှစ်ခုကိုဖြဲကာ ခရေတွင်းကိုချောဆီခပ်အေးအေးတွေဖြည့် ပေးပါတယ်။ 'အိုး..ငါ့ကောင် မင်းစွဲသွားမှာပါ' တဲ့မင်းသူက သူ့ဘော်ဒါကို ပြောလိုက်သေးတယ်။ ချမ်းမြေ့က ကျွန်တော်နေတဲ့ဘေး တစောင်းအနေအထားအတိုင်း သူက နောက်ဘက်က အသာနေရာဝင်ယူတယ်။ အောင်မလေး...နောက်ပြန်ကြည့်ရတာတောင် အကြော တွေ ထောင်နေပြီး ငပဲခေါင်းကလည်း သွေးရောင်နှင့် ရဲနေတာ။
ရုတ်တရက် ငပဲခေါင်းက ကျွန်တော့်ခရေ၀နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လာထိတယ်။ ပူနွေးပြီးမာနေတော့ ကျွန်တော်ခေါင်းထောင်ထမိတာ မင်းသူက ကျွန်တော့်ပခုံးတွေကိုဖိပြီး အိပ်ယာနှင့် ကပ်နေစေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကိုဖြေလျော့ကာ တဖြည်းဖြည်းဝင်လာတဲ့ငပဲ ခေါင်းကို အသာလက်ခံရတာပေါ့ဗျာ။ အား... ကျွန်တော် သူ့ပစ္စည်းကြီးဝင်လာတော့ နှုတ်ကမအောင့်နိုင်အောင် အော်ညည်းမိပါတယ်။ သူ့လက်ကြီးတွေက ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို ဖိကိုင်ပြီးထိန်းရော။ တင်သားဆိုင်တွေကြားထဲကတစ်ဆင့် ငပဲဟာ ခရေ၀ထဲ နက်သထက် နက်အောင်ဝင်လာပါတော့တယ်။ မင်းသူ့ငပဲနှင့် လမ်းကြောင်းပြီးသားမို့တော်တော့တယ်။ အစိမ်းသက်သက်ဆိုသေရောပဲ။ ငါးမိနစ် အတွင်းမှာပဲ ချမ်းမြေ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံး အဆုံးထိဝင်သွားပါတယ်။ ချမ်းမြေ့က ဆရာကြီးများလားမသိ။ 'အိုကေဘော်ဒါ၊ မင်းကြုံဖူးတဲ့ဟာ တွေထက် ကောင်းအောင်ပြုစုပါ့မယ်' တဲ့ပြောသေးတယ်။ 'ဒါကြီးနဲ့လေ' သူစပြီးတော့ အထုတ်အသွင်းလုပ်တယ်။ အစကတော့ ညင်ညင် သာသာပါပဲ။နောက်တော့ ခပ်ပြင်းပြင်းလေးလုပ်ပါရော။ 'အား...အ...အ' မင်းသူက သူ့ငပဲထိပ်ပိုင်း တစ်လက်မနှစ်လက်မလောက်ပဲ ခရေ ၀ထဲအထုတ်အသွင်းလုပ်တာ။ ချမ်းမြေ့ကတော့ သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံး အစမှအဆုံးတိုင် ဖိဖိဆောင့်တာဗျ။
'Fucking Machine" တစ်ခု ဖင်မှာတပ်ထားသလိုပဲ။ ချမ်းမြေ့က တကယ့် fucking machine ကြီး။ ဒီလထဲမှာ ဘယ်ဖင်ကိုမှမလုပ်ထား ဘူးလားမသိ အားရပါးရကြီးကိုကြဲနေတာ။ တစ်ချက်တစ်ချက်ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်မှာ အော်ညည်းလိုက်၊ မိန်းမောလိုက်ပဲ တတ်နိုင်ပါတော့တယ်။ ကောင်းတယ်မဟုတ်လား? ကောင်းလား? သူ့နှုတ်ဖျားက မေးမေးပြီးသွင်းတာ ကျွန်တော့်ခရေ၀လည်း ပူထူပြီး သိပ်မနာတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမယ်မသိ ကျွန်တော့်ငပဲကို မထိမပြုမဆွဘဲ အစွမ်းကုန်မာထောင်ပြီး အဆုံးသတ်ချင်စိတ် ဖြစ်လာပြီးနောက် ငပဲကခုပဲဖြူပျစ်ပျစ်တွေပန်းထွက်တော့မယ့်အတိုင်းဗျ။ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ချမ်းမြေ့မွှေချက်ဆောင့်ချက် တွေကြောင့် 'ငါပြီးပြီ...အာ...ပြီး...ပြီ' လို့ ကျွန်တော့်ချစ်သူဖြစ်တဲ့ မင်းသူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး အော်လိုက်မိပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ climax ဖြစ်မှုဟာ ဘယ်လို အမည်တပ်ရမယ်မသိတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ တဆတ်ဆတ်ရမ်းနေတဲ့ ငပဲခေါင်းကနေ သုတ်ရည်တွေက စမ်းရေပေါက်တစ်ခုလို ကျွန်တော့်ဗိုက်သားတွေ ရင်အုပ်တွေ ဆီ ပစ်လွှတ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ပြီးဆုံးတဲ့နောက် ဘယ်လောက်ကြတဲ့အထိ ချမ်းမြေ့ဆက်လုပ်နေလဲ တကယ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ရာဘာမိန်းမအရုပ်တစ်ရုပ်လို ကျွန်တော်ဖြင့်ငြိမ်သက်နေမိပါတယ်။ နာရီအတော်ကြာ သူ-ိုးနေတာ သနားစရာ ကျွန်တော့် ခရေ၀လေးထူပူ ပြီး အာရုံမခံစားမိတော့။ ကံကောင်းစွာပဲ ချမ်းမြေ့ရဲ့နှုတ်ဖျားက 'ဖင်ကြွက်သားတွေကို ညှစ်...ညှစ်ပေး ပြီးတော့..မယ်' လို့အော်သံကြားရ တယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း တင်ပါးကို ပိုမိုနောက်ကိုပစ်ဖိသွင်းပြီး ဖင်ကြွက်သားတွေကို ညှစ်ညှစ်ပစ်လိုက်တယ်။ သူ့မိန်းမောညည်းညူ သံဟာ ဟိုးအဝေးကြီးကလာသံလို ကြားရပြီးနောက်မှာတော့ သူ့လှုပ်ရှားမှုဟာ တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားပါရဲ့။ သူ ကျေနပ်သာယာသွားပြီ ပေါ့လေ။
မင်းသူ အဆုံးသတ်သလိုပဲ ချမ်းမြေ့ကလည်း ကူကယ်ရာမဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကနေ ဂရုတစိုက်ဖြည်းဖြည်းဆွဲထုတ်ပြီး အဆုံးသတ် တယ်။ ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက် အိပ်ယာပေါ်မှာ အသာလှဲလျောင်းနေတယ် ခဏပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် အရင်ပဲ သန့်စင်ခန်းထဲပြေး ၀င်မိပါတယ်။ ခုတင်ပေါ်ကနေ ကြမ်းပြင်ပေါ် ခြေချမိတော့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုလမ်းလျှောက်မိသလဲမသိ ငနဲနှစ်ပွေက ကျွန်တော့်လမ်း လျှောက်ဟန်ကိုကြည့်ပြီး သဘောတကျရယ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေလည်း ဓာတ်မီးနှင့် အတွင်းထဲအထိုးခံထားရသလို တကယ်ခံစားရပါပြီ။
အနားယူကြပြီးနောက်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်က ထပ်ပြီးကဲချင်ကြသေးတာပါ။ ကျွန်တော့် ခရေ၀က ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်တော့။ သူတို့တွေကို စိတ်မပျက်စေချင်တော့ ငပဲနှစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်နှင့်ပဲ စုပ်မှုတ်ပေးရင်း ညရဲ့အချိန်ကို အဆုံးသတ်ပေးရပါတယ်။
ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို စာပြန်ရေးပြနေတဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ညက ဖီလင်တွေနှင့် ပြန်လည်မိန်းမောမိပါရဲ့။ အမှန်ပြောရရင် သူတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံးနှင့် ဆက်ဆံရတာ တကယ်ကျေနပ်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်လုပ်ဦးမလား အမှန်ပြောဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တကယ်မသိ။ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ခရေ၀(အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်ခရေ၀)ဟာ ဒီလိုငပဲထွားထွားနှစ်ချောင်းကို ကိုင်တွယ်နိုင် ပါ့မလား မသေချာပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လေ ကျွန်တော် တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို သတိရတမ်းတနေတော့မှာပါ။
Alex Aung (26 Jan 2012)
Posted by Min Lay at 7:32 AM
Labels: Alex Aung, sex story
At the Self Storage
Little Stud Nurse